Isidlo esisisidengezelo seenkwenkwezi - HienaLouca
Juni 6, 2018 Dianne Reeves abadumileyo
Ukunciphisa ubunzima, sinokukwazi ukuzincama. Sinqabela amazambane, sithumela ikhukhi kwibhaksi. Sibala iekhalori, sizihlambele ngokwee-saladi.
UJennifer Lopez Ndiyisebenzisa oku kutya ....
Zonke ok nje nje ngokuba sihlala sithintana nomhlaba. Okubi kakhulu, xa silahlekelwa nguye kwaye simvumele ukuba achukumise izilumko, kwaye ngamanye amaxesha ayenobungozi, ukutya.
Iinkwenkwezi ezininzi kwinqanaba lawo ziyizidlo zenyama. Umdlali omnye uhlamba iindidi ze-13 amaxesha ngaphambi kokugwinya. Omnye uvuselela imetabolism ngokusela iviniga.
UMarilyn Monroe wasebenzisa ukutya kweedrafruit, okwakungumfashiso ngexesha. Phakathi kwekhulu leminyaka elidlulileyo, kwakukho "umdlalo" wokudla isiqingatha sesiqhamo ngaphambi kwesidlo ngasinye.
Izondlo zibiza ukuba iidipefruit ziqukethe i-enzyme ezenza i-metabolism ijonge.
Megan Fox Ndadla isobho ukuze ndinciphise umzimba.
Xa wayefuna ukunciphisa umzimba, wayedlulela kwisondlo esekelwe kwiisobho. Wadla lo msizi kathathu ngosuku.
Isobho se-calori esezantsi sisoloko sisisigxina, siphucula ukulawulwa kwamanzi emzimbeni.
Omnye, ukutya okunomdla okufanayo kwasetyenziswa Christina Aguilleroi.
Inkwenkwezi yondliwa ... ngeentyantyambo. Ukutya kombala weentsuku ezisixhenxe kwamvumela ukuba abe nelinye ilanga. Ngokomzekelo, ngoMsombuluko u-Christina wadla kuphela iintyatyambo ezimhlophe, ngoLwesibini - obomvu, ngoLwesithathu - oluhlaza kunye njalo njalo.
Ngokweentengiso, URene Zellweger ukulahleka kwesisindo, ukutya ukutya okungekho amanzi. Ayaziwa ukuba yintoni inyaniso kule ngxelo. Utshanje wabhala ukuba umdlali we-actress useyidlo yokudla. Yidla iintlanzi, ilayisi, imifuno.
Oku kuzwakala ngokucacileyo ngakumbi.
Ziziphi ezinye iinkwenkwezi ezingenangqondo ezizenzayo ukuze zinciphise umzimba? Khangela kwigalari, Nceda, nceda-uthathe umzekelo kubo.
Ngaba uyayithanda le nqaku? Beka izinto ozithandayo kwaye ungeze kwi-intanethi yentlalo. Njengobhonasi "Phezulu kwabesetyhini abahle kakhulu nabasetyhini. Saqulunqa uluhlu lwe-23 ngabasetyhini abahle kakhulu kwihlabathi. Nangona, ungakhohlwa ukuba kukho ubuhle bokomoya kwaye kubaluleke ngaphezu kokukhanga. Oku kukukhanya okukhanya kuwe, kwaye ngulo ubuntu bakho. Nalu uluhlu lwale mihle bafazi basebenza kanzima ukuze bafike apho bahlala khona namhlanje yimile.
Umhla wokuzalwa: 22 Novemba 1984 Indawo yokuzalwa: iManhattan, eNew York, eU.SA Ubukhulu: 1,6 m Umsebenzi: Umdlali U-Scarlett Johansson ungumdlali waseMerika, umzekelo kunye nomculi. Njengomntwana, waqala ukusebenza kwakhe. Ifilimu ethi "Ilahlekelwe Ngenguqulelo" kunye noBill Murray yayiyinxaxheba yakhe yokuphumelela. I-ScarJo idlala ngokugqithiseleyo umdlali we-25 oneminyaka eyi-18. Ezinye zezinye iifilimu zakhe ezidumile: uVicky Cristina Barcelona, ​​uLucy, uDon John nabanye.
Umhla wokuzalwa: 5 Januwari 1986 Indawo yokuzalwa: I-Copenhagen, iDanmark Ukuphakama: I-1,74 m Umsebenzi: I-Awardress Awards kunye nempumelelo: wathola amaxabiso amaninzi, kuquka neentengiso ezintathu ze-Filmfare UDeepika Padukone Ungomnye wabadlali bezona zibalaseleyo ezihlawulelwayo kwihlabathi. Waba neenkwenkwezi kwiifilimu ezifana neBhajirao kunye noMastani, Pique nabanye. Iprojekthi yakhe yokuqala yaseHollywood yenzeka kwi-movie yesenzo xXx: Ukubuya kwe-Xander Cage kwi-2017. Kananjalo unempahla yakhe yokugqoka, kwaye wasungula i-fund ebizwa ngokuba yi-Live Laugh Love ukunyamekela unyango lwempilo eNdiya.
Umhla wokuzalwa: 25 Agasti 1987 Indawo yokuzalwa: Los Angeles, California, USA Ukuphakama: 1,78 m Umsebenzi: Umdlali Amabhaso kunye nempumelelo: wanikela i-Award Choice Award yokuPhucula iNgcono. Ubomi buyaziwayo ngendima yakhe njengoS Serena Van Der Woodsen kwi-Gossip Girl series. Kwakhona wayesebenza kwiifilimu ezifana noDade of the Traveling Bants, Green Lantern, Age of Adeline kunye ne-Shallows. Utshatile kumdlali weRyan Reynolds.
Umhla wokuzalwa: 4 Juni 1975 Indawo yokuzalwa: Los Angeles, California, USA Ubude: m 1,69 Profession: Actress, bhanya, wobuntu, Ningabameli United Nations Awards kwaye wafumana i-Oscar, ezimbini Screen inkuthazo ngabasemagunyeni Guild Award ezintathu "Golden Globe" ibhaso U-Angelina Jolie njengomdlali we-Hollywood ophezulu ohlawulelwayo. Wathandwa kakhulu emva kokuba abe neenkwenkwezi kwi-blockbusters uLara Croft. Usebenza ngokusebenza kwimibandela yamalungelo omntwana, amalungelo oluntu kunye namalungelo amabhinqa. Wasekela i-Jolie-Pitt Foundation, ejongene neengxaki zobomi emhlabeni wonke.
Umhla wokuzalwa: 17 Juni 1986 Indawo yokuzalwa: eKhennai Ubukhulu: 1,78 m Umsebenzi: umzekelo, umlingisi, iimpahla zokuyila ULay Haydon uqale kwi-Bollywood kwifilimu Aisha. Kwakhona wamukelwa ngokubanzi kwimisebenzi yakhe kuKumkanikazi. Njengomzekelo, wayeqatshelwa ngesitayela sakhe esingenakuqinisekiswa. Wathatha inxaxheba kwiveki ye-Indian fashion Wills Lifestyle.
Umhla wokuzalwa: 13 Juni 1986 Indawo Yokuzalwa: ePennsylvania, eU.SA Ubukhulu: 1,61 m Umsebenzi: Umdlali Amabhaso kunye nempumelelo: unyulelwe ngamabhaso ahlukeneyo, afana nee-MTV Movie Award zokuPhucula okuMnandi, kwaye wayinqoba i-Crystal Reel Award ye-Best Actress. Kat Dennings neqembu yakhe film "Ukulalana kunye neSixeko" kunye "HBO", ngoko kwezinye imisebenzi yakhe, uye wasebenza iifilimu eziliqela, ezifana "spinster 40-oneminyaka ubudala", "Big uMama House 2", "Infinite Playlist" "Aqui." Naye udlala indima ekhokelayo kwi-comedy Xi-2 2 Broke Girls.
Umhla wokuzalwa: October 4 1989 Indawo Yokuzalwa: Austin, Texas, USA Ubude: m 1,71 Profession: Amabhaso Actress kunye nempumelelo: e 2006, akubamkela isihloko "Nkosazana Golden Globe" baza baphumelela "Abantu xa Choice" ukulungiselela umdlalo owuthandayo umdlali wefilimu UJohnson wayeneminyaka engama-9 kuphela xa wayenza yokuqala yefilimu yokuqala. Kamva, umdlali we-actress waqaphela indima yakhe njengo-Anastasia Steele kwi-Fifty Shades franchise. Ukongeza ekubeni ngumdlali we-actress, uthanda izilwanyana kwaye ungumlindi wolungelo lobulwanyana.
8. IDddan Dunn
Umhla wokuzalwa: Agasti 3 1990 Indawo yokuzalwa: Greenford, Ubude United Kingdom: 1,8 m Umsebenzi: Model Awards neempumelelo: Award Glamour ukuba iphefumlelwe. I-Jourdan Dunne yafunyanwa yi-ejensi yeStorm Model, eyafumaneka kwakhona yiKate Moss. Ukususela ngoko, u-Dunn uthathe iifashini zehlabathi ngeqhwithi. Wabamba iqela kwimiboniso malunga nendlu yonke yefashini kwihlabathi. Uthathwa njengenye ye-supermodels yesi sizukulwana.
Umhla wokuzalwa: 23 Oktobha 1986 Indawo yokuzalwa: London, UK Ubukhulu: 1,57 m Umsebenzi: Umdlali Amabhaso kunye nempumelelo: uzuze umklomelo weSkream ukuphumelela kwabasetyhini, umvuzo we-SFX we-Best Actress. Owesifazane omhle wenyuka waya kwipolumu ngenxa yendima yakhe kwi-series HBO Fantasy Game yeTrone. Umlingiswa wakhe uDanaerys Targaryen 'aka' Khaleesi 'ufumene udumo olukhulu kulo lonke ihlabathi. NgoNovemba 2016, waqalwa njengowesifazane okhokelayo kwi-movie "Star Wars".
Umhla wokuzalwa: 17 Novemba 1978 Indawo yokuzalwa: iLondon, eCanada Ukuphakama: I-1,63 m Umsebenzi: I-Awardress Award kunye neempumelelo: uphumelele i-Screen Actors Guild Award, I-Award Choice Award, i-MTV Movie Award ye-Best Breakthrough. Omhle uRachel McAdams wabonisa udidi luka-Ellie kwi-Laptop waza weba iintliziyo zethu. Waya ekholeji waza wafunda, waza wasebenza kwiinkampani zeTanzania zethelevishini ezinxulumene ne-filmmaking. Ezinye zeefilimu zakhe ezidumileyo "ngabaMantombazana aphakathi", "Ukhangele umfazi wexesha lohambo", "iCrashers yomtshato" kunye ne "Stone Stone".
Uhlu olupheleleyo abadumileyo.
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-1,126, ukutyelelwa kwe-1 ngosuku)
U-Shakira oneminyaka eyi-41 usenomtsalane? (PHOTO)
UGigi Hadid MALUMA UMzalwan 'uAnwar ngaphambi koKendall Jenner
ULandandowska unokuqhayisa ukutyelela umnwele!
U-Angelina Jolie - emthendelelweni oyingcwele
UDenis Cheryshev ephumla kunye nentombi yakhe yaseSpain
Papin ikopi! U-Irina Bilyk ubonise unyana okhulile waseTabriz
Umlingane owayengumlingani uAmber Hurd wamgculela uJohnny Depp ngetottoo awazinikele kuye
Usuku lwesibini lomthendeleko othi "Ukushisa-2018" kuBaku: Tatiana Navka noDmitry Peskov, uKristina Orbakaite, Leila ...
URosa Al-Namri wancoma ngomyeni wakhe ngosuku lwakhe lokuzalwa: "Ndiyakuthanda kakhulu, sam Sashenka"
Umxhamli-nxaxheba kwiprojekthi "Isikolo soBucala" kunye no-post-show show "Indlela yokutshata?" URosa Al-Namri uzama ukuvakalisa ubomi bakhe abucala. Kuyaziwa ukuba intombazana yadibana nomzukulu ka-Ada ...
UJessica Weaver (Jessica Weaver) kunye nabaxhasi bakhe be-4.9 (i-71 photo)
Ifoto ye-71 kaJessica Weaver evela kwi-instagram yakhe yangasese. Ngubani onjalo uJessica Weaver (Jessica Weaver) akekho owaziyo. Zonke ezo ...
URachel Fenton kumaqela aseMaya Jam eLondon
URacent Fenton kwiqela lamaMaya yaseFamily yaseLondon - 25-06-2018 Khangela ukuba ukhulule iifoto zikaRachel Fenton, iindaba malunga nama-scandal of celebrities, ...
UJanet Dzhexon wenza ubomi kwiilonda (ukudandatheka)
UJanet Jackson kufuneka nje avume ukuba akazange adibana nabani na oqhelekileyo ebomini bakhe bonke. Ubiza ukuba uyabuhlungu, kwaye uyalwela ...
UVictoria Justice noJoseph Skinner babonwe kwi-parade ye-gay eNew York
Umculi wefilimu waseVictoria Justice - waseMerika, umculi kunye nomzekelo wonwabo bonke e-New York. Kwesinye isahluko se-parade, ipaparazzi isusile inelisekile ...
Post Previous:EZINYE iinkwenkwezi zasePoland zigqoka imihlobiso ngesimo se-CROSS!
Okulandelayo Post:UTristan Thomson uqulethe inkosikazi emva kweCloe!